'Angiyikholwa eyokuthi uSenzo wabulawa bebanjwa inkunzi' - Chicco | News24
'Angiyikholwa eyokuthi uSenzo wabulawa bebanjwa inkunzi' - Chicco
Johannesburg - Inkakha kwezomculo kuleli uSello “Chicco” Twala useveze ukuthi akayikholwa eyokuthi kwakunesigameko sokuphanga ngosuku okwabulawa ngalo lowo owangunozinti weBafana Bafana ne-Orlando Pirates, uSenzo Meyiwa.
Usenxuse ukuthi bonke la bantu abayisithupha ababekhona kwenzeka lesi sehlakalo ukuba bakhulume iqiniso.
Kwenye yezingxoxo zakhe nabezindaba, uTwala utshele iPower FM wathi: "La bantu abayisithupha kumele bakhulume iqiniso. Kukhona umuntu owadubula, wabulala uSenzo ngalobuya busuku, bathuleleni?
“Angiyikholwa le yokuthi babebanjwa inkunzi. Kukhona owaziyo ukuthi uSenzo wabulawa ngubani, okubalwa nendodana yami lapho phakathi. Kumele baboshwe bonke uma isidingo sikhona. Ngicela bangangifaki kulo mbhedo."
La bantu abayisithupha uTwala akhuluma, yindodana yakhe uLongwe nabangani bayo ababili, uKelly Khumalo, umama wakhe nodadewabo uZandile.
OLUNYE UDABA: UChicco uthi ubaba kaSenzo unobuSathane
UTwala uphawula kanje kulandela izinsolo ezithi kwasetshenziswa isibhamu sakhe ngesikhathi kubulawa uSenzo.
Amahlebezi ezinkundleni zokuxhumana asola ukuthi uLongwe wasebenzisa isibhamu sikababa wakhe ngesikhathi edubula uSenzo.
UTwala uthi iyamnenga indlela abekwa ngayo ezinkundleni zokuxhumana. "Kwaba yicala yini ukuthi ngifonelwe bese ngiphuthuma esibhedlela? Abantu bakuleli sebesola mina manje, ngiyathukwa," esho.
Uthi uzimisele ngokugeza igama lakhe futhi wathembisa nokuqinisekisa ukuthi leli cala liyaxazululwa ngokushesha.
"Ngizogqugquzela uFikile Mbalula ukuthi abophe abantu. Ngizobanga umsindo ngoba ngifuna ukugeza igama lami. Uma kungukuthi indodana yami inecala, uMbalula kumele ayibophe bese eyibeka icala khona izovalelwa ejele," esho.